WAXAAN KU KORAAN STRAWBERRIES "SAYID" ON OUR SHOT - STRAWBERRIES
Bannaanka u badan yihiin kuma faraxsan yihiin kala duwan ee dalagyada beerta. Si kastaba ha noqotee, inta badan naftooda waa inay eedeeyaan iyaga oo aan helin natiijada laga filayo, sababtoo ah waxay si xun u daryeeli karaan strawberries. Laakiin noocyada kala duwan waxay u baahan yihiin hab gaar ah iyo xaaladaha qaarkood ee xabsiga. Iyo strawberry "sayid" ma aha wax ka reeban xeerarkan.
Noocyo noocyo strawberry ah "Rabbi"
Noocyada kala duwan ee cawska ayaa caan ku ah dhadhanka jilicsan iyo dhalidda sare. Si kastaba ha noqotee, si aan loo khiyaameeynin waxa laga filayo, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso qaar ka mid ah xafladaha beeraha. Strawberry "Lord" waxaa laga soo rarey Boqortooyada Boqortooyada Ingiriiska oo loo yaqaan 'breeders'. Waxaa loo aaneynayaa noocyo dhexdhexaad ah, tan iyo xilliga Bisaylka ee berry ah halkii dheer (dhamaadka Juun - dhammaadka July) oo kaliya kor u qaado waqtiga. The duurka ee qashin this waa mid aad u sarreeya - 60 cm oo kacsan. Peduncles xoog leh, laakiin goosashada hodan ah waxay u baahan tahay garaf, sababtoo ah miisaanka hoos u dhaca miro geedka dhulka. Berry guduudan waa kuwo waaweyn (80-100 g), waxay leeyihiin qaab caleen-qoyan oo leh caraf udgoon iyo dhadhan-macaan.
Strawberry "Lord" waxaa lagu qiimeeyaa wax-soosaarkooda, iyo sharaxaadda noocyada kala duwan (oo ku xiran xeerarka teknoolojiga beeraha) waxay ballan-qaadaan ilaa lix berry oo hal-abuur ah. Dhab ahaan, hal xilli, 2-3 kg ee strawberries laga soo ururin karaa hal baadiyaha. "Sayid" waxaa lagu gartaa muddada dheer - iyadoo ku haboon daryeel, noocaan kala duwan wuxuu siinayaa dalag toban sano ah. Sidoo kale dhirta waxaa lagu kori karaa labadaba sawirrada shakhsiyeed, iyo qiyaasta warshadaha.
Marka lagu daro caabbinta barafowga "strawberries" "Lord", faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid ah:
Is-adkeysiga sare ee kalluunka iyo cayayaanka strawberry;
Joogitaanka tiro badan oo antenna ah ee dhalmada;
Muddada mudaynta muddada dheer.
Dhibaatooyinka ka mid ah waa in la ogaadaa heerka sare ee koritaanka baadiyaha iyo shuruudaha adag ee waraabinta.
Ma taqaanaa? Dad badan ayaa si qalad ah u yaqaan strawberries beerta strawberries. Si kastaba ha ahaatee, strawberry way kala duwan tahay strawberry ee unit-unugga - ubaxa dumarka iyo labka ah waxay ku yaalaan hal baadiyaha, i.e. waa is-filiqsan. Sidaa darteed, strawberries leeyihiin berry ballaaran iyo dhalidda sare.
Doorashada meel loogu beero qudaarta "Lord"
Haddii aad doorato meel beeritaanka strawberries "Lord", iska ilaali aagagga cakiran. On iyaga, dhirta ma heli doonaan iftiin ku filan, taasoo keenaysa dhalidda waa la dhimay, iyo berry lumin hantida - ma noqon doonaa sidaas macaan iyo weyn. Sawirka beeritaanka waa inuu noqdaa mid siman, inkasta oo qaar ka mid ah ay yiraahdaan in strawberries ay ka sii kori doonaan qulqulka koonfurta-galbeedka.
Waa muhiim! In dooxooyinka si ay u koraan strawberries ma shaqayn doonaan - ma u dulqaadan heerkulka hoose, dabayl iyo qoyaan sare. Xitaa haddii uu strawberries on qorshaha sida iyo dhali doonaa, waxay noqon doontaa caafimaad darro, iyo berry - yar.
Si ay strawberry ku faraxsan tahay beergooyska, ciidda taas oo la qorsheeyay in ay ku koraan waa in ay ahaadaan ciid iyo loamy iyo wax yar acidic (5.5-6.5 pH). On ciidda ciidda iyo dhoobo, berry noqon doonaa yar yar - iyagu ma yeelan doonaan qoyaan ku filan. Waxyaabaha hooseeya ee strawberries "Sayid" waxay ku jiri doonaan xumbada, carrada iyo cusbada oo leh qandho sare leh.
Waa muhiim! Haddii uu jiro dhulka hoose ee deyrka, sariiraha waa in sare loo dhigaa..
Biyaha carrada ugu badan ee cawska laga sameeyo ayaa loo tixgeliyaa inay yihiin humus iyo hodan ku ah qaybaha dabiiciga ah. Ciidda noocan oo kale ah ayaa loo samayn karaa: xilliga dayrta, caleenta la soo ururiyey iyo digada ayaa la jarjaray oo ku shubay dhowr lakab oo dhulka ah, ka buuxsamay biyo oo ka tagay si ay u socdaan ilaa guga.
In technology teknoolojiga ee strawberries sii kordhaya "Rabbi" isticmaali sida sida ciidda aasaasiga ah ee aasaasiga, kala duwan iyo xulashada qaybaha dheeraad ah:
Si looga hortago weerarka on strawberries ee cayayaanka, dhulka waa la nadiifiyaa iyo waraabiyo biyo ammonia ka hor beerto, iyo xakamaynta cawska leh xal gaar ah. Sariiraha loogu talagalay "Sayid" waa suurad wacan in la sameeyo toddobaad ka hor intaan la beeri. Isla mar ahaantaana, ballaadhkoodu waa inay ahaadaan ugu yaraan 80 cm, iyo masaafada u dhexeysa duurka - 80-100 cm.
Xeerarka beeritaanka strawberries noocyo "Rabbi"
Si sariiraha leh strawberries aan loo rogin godxum qaro weyn, marka beerto duurka u baahan tahay in lagu meeleeyay qaab habaysan, iyo ma hal saf ah. Markaas dhirta waxay yeelan doontaa meel ku filan koritaanka, iyo midhaha - hawo ku filan iyo iftiinka qorraxda ah ee dillaacaya. Dhirta Strawberry "Lord" ee dhulka u furan ee la beeray bishii Agoosto. Ka hor inta aanuu barafoobin, dhirta waxay yeelan doontaa wakhti ay ku dhisto nidaamka asaasiga ah waxayna qaadataa xidid. Bannaanka u badan waxay u muuqdaan in ay ku fikiraan in waqtiga ugu wanaagsan ee lagu beerayo strawberries horaan guga. Inta lagu jiro muddadan, ma xakamayn doono, iyo xagaaga waxa ay yeelan doontaa wakhti ay ku koraan oo yeeshaan xoog. Si kastaba ha ahaatee, inta lagu jiro beeritaanka guga ee geedo, caws ubaxa waa in laga saaro saldhig khasab ah si ay strawberries ha ku khasaarin xoogooda on iyaga. Ka hor inta beerto, ciidda waa in aan lagu daadin biyo - waa inay ahaadaan qoyan.
Meelaha geedo waa inay ahaadaan 30 cm oo qoto dheer. Waxay ka buuxsameen humus iyo qaado oo ah superphosphate, nus koob oo ash iyo shaaha oo ah shaaha oo sulfate ah ayaa lagu daray. Dhammaan qaybaha waa isku dhafan, kaliya markaa strawberries waxaa lagu beeray. Diiditaanka waxaa si wanaagsan loo sameeyaa mabda'a "filimka hoostiisa." Si aad tan u sameyso, waxaad u baahan tahay inaad sariir ku jiifiso baakado balaastig ah (oo doorbidan madow) oo godad ka samee godka hortiisa. Caleemaha marka ay ku dhuumanayaan filimka, iyo jadwalku waa mid sarre. Markaad beerto cagaarshow, isku day in aad hesho nidaamka asaasiga ah ee heerka dhulka.
Haddii geedo ay leeyihiin caleemo badan, waa la saaraa, oo kaliya 3-4 ku yaal bartamaha. Rootiyaal Long waxaa la gaabin ilaa 5 cm iyo ka hor inta beerto dhoobo in hadal ah oo ku salaysan dhoobo, ka dibna la dhigo godka, si tartiib ah toosan oo xididdada, iyo rusheeyeen dhulka. Geedo geedo ka samee roodhi yar oo dhoobo ah si ay biyuhu u faafaan marka waraabiyo. Haddii goobtaadu tahay mid joogto ah carrada qoyan oo aanad heli karin meel loogu talagalay strawberries, waxaad isticmaali kartaa habka abuurka shanlooyinka. Si arrintan loo sameeyo, ku dhaji width width 100 cm, on dhinacyada kaas oo la dhigo grooves for drainage biyo xad-dhaaf ah.
Waa muhiim! Noocyada kala duwan ee strawberry waxaa ugu wanaagsan laga beeray midba midka kale, sidaa darteed ma ay macaawin.
Daryeelka habboon waa fure u ah goosashada wanaagsan.
Strawberry "Lord" wuxuu leeyahay iska caabin wanaagsan ee cudurada iyo ficil ahaan ma ku dhibto cayayaanka. Xitaa haddii geedka jiran yahay, waa la badbaadin karaa. Wixii ka hortagga cudurada, waxaa lagama maarmaan ah si joogto ah caws buuan cawska, ka saar caleemaha qalalan, mulch u dhexeeya saf, pollinate iyo codsan Bacriminta fosfate potassium.
Waraabinta, jaridda dhirta iyo dabacsan sariiraha
"Sayid" wuxuu u baahan yahay waraabin badan. Tani waxay si gaar ah muhiim u tahay wakhtiga sameynta burooyinkeeda iyo ubax. Mugga biyaha ayaa ku xiran heerka qoyaanka ciidda. Celcelis ahaan, ka yar baadiyaha waxaad u baahan tahay inaad ku shubto litir biyo ah. Isla mar ahaantaana, joojinta qoyaan iyo qoyaan xad-dhaaf ah waxay si xun u saameeyaan dhadhanka strawberries "Sayid" iyo culeyska berry. Doorashada ugu fiican - waraabinta microdrop. Ku dhowaad dhammaan xilliga daaqsinka ee duurka u bixiyaan caleemaha gaarka ah - antennae. Waxay qaadataa xidid, iyo baadiyaha yar yar u muuqda. In cimilada roobka, waxaa lagula talinayaa inay daboolaan strawberries leh foornada.
Ma taqaanaa? Sallaan, radishes, dabacasaha, basasha, dillada, xididada iyo digirta ayaa ah kuwa ugu fiican ee loo yaqaan "strawberries", laakiin xaqiiqda ka dib kaabajka, raspberries, qajaarka iyo solanaceae, waa suurtogal in la beero strawberries iyo strawberries - dalaggu wuxuu noqonayaa mid aan muhiim ahayn.
Cagaarka iyo dabacsanaanta waxay u sahlanaataa qoyaan si ay u helaan nidaamka asaasiga ah. Markaad qabatid hawlahan waxay isticmaalaan aaladaha beerta gaarka ah.
Strawberry "Rabbi" waa mid aad u nugul Bacriminta, waxaadna u baahan tahay inaad ku quudiso ugu yaraan afar jeer xilli.
Heerka horumarinta Sida loo quudiyo strawberries "Rabbi"
Ka hor inta aan la beeri ama ka hor inta aan la samaynin waraaqaha ugu horreeya (ee kiiska lagu beeray xilliyadii hore)
peat iyo humus - qiyaasta 5-8 kg halkii 1 sq.m.
Bacriminta macdanta ee aan ku jirin chlorine (superphosphate, HOL) - 50 g 1 mitir labajibbaaran;
isku dar ah humus (2 baaldiyaal) iyo ash (muraayad) - gacan muggeed halkii 1 sq.m.
Isku qas 30-50 g of humus, spoonful of superphosphate iyo ¼ koob ash iyo ku shub si fiican - mid kasta oo wanaagsan;
30-50 g of compost, 15 g oo ah cusbo potassium, 30 g of superphosphate, 15 g oo ah HOL - qaso iyo ku shub ceelka;
kalluunka horay u sii kordhaya waxaa la bacrimiyey xal of HOL iyo monosodium glutamate (1 tbsp 10 litir oo biyo ah) - 0.5 l baadi kasta.
Ka dib markii caleemaha kowaad ee strawberry "Sayid" si ay u kordhiyaan dhalidda
Nafaqo-dheellitir leh (waa muhiim in aan ka badnayn qiyaasta);
nitroammophoska (qaado qaado 10 litir oo biyo ah);
rusheeyaa HOL (0.5 qaado oo ah 2 litir oo biyo ah).
Sida ugu dhakhsaha badan midhaha bilaabay
Nitrateum potassium (2 qaado oo halkii 10 litir oo biyo ah);
xal oo qoryo ah (2 qaado oo daadi ah oo biyo ah kuna adkeyso 24 saacadood).
Ka hor inta jiilaalka By bartamihii Sebtembar, digada lo'da leh ash (0.5 koob oo baaldi digada). Ka dib 14 maalmood, ku shub xal xal (koob), sodium sulfate (30 g), nitrophoska (2 qaado), biyo (baaldi). Isla markiiba qabow ka yar duurka u gelin humus ama Doodwanaag.
Waa muhiim! Cunto "sayidku" kaliya wuxuu u baahan yahay arrin wax ku oolla ah, sababtoo ah xididdadiisa waxay ku dhowyihiin dusha sare waxaana jira halis ah in la gubo.
Neefsashada inta u dhaxaysa saf
Mulching wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa daryeelka strawberries - xilliga jiilaalka wuxuu ka ilaaliyaa dhaxan, xagaaga waxa uu ka ilaaliyaa miraha ka yimaada wasakheynta, waxay xajisaa qoyaanka waxayna u ogolaataa dabacsanaan yar. Frost waxay burburin kartaa strawberries, markaa waa inaad maareysaa mulching. Si arrintan loo sameeyo, waxaad isticmaali kartaa cirbadaha geed: tobanka 10-cm waxay si fiican u ilaaliyaan dhirta jilicsan ee qabow. Cirbadaha Mulch waxaa sidoo kale lagu talinayaa in lagu xakameeyo cayayaanka. Marka khatarta ah ee barafku uu dhaafo, caleemaha hore ayaa laga saaraa duurka strawberry, iyo ka dib muuqaalka caleemaha cusub, sariiraha waxaa lagu daboolay lakabka 5-centimeter ee cirbadaha qalalan.
Tan iyo miro-khudradda "Lord" miraha waa la baabi'in karaa, ka dibna goosashada iyo kaydinta waa in loo soo dhawaado si masuuliyad leh. Haddii aad rabto inaad ilaaliso beergooyska muddo wakhti ah, markaa waxaad u baahan tahay inaad soo qaadato miraha beeraha si aad u buuxiso, halka miraha weli yihiin casaan. Foomkan, waxaad ku kaydin kartaa strawberries ee qaboojiyaha 2-3 maalmood. Xoolaha loo rarayo waa in laga saaraa baadiyaha oo ay la socdaan sepals, oo ka tegaya dabo yar. Wakhtiga goosashada - ka dib marka dharabtu ku qoyaan subaxa ama ka hor qorrax dhaca habeenkii.
Waa muhiim! Tan iyo "sayidku" waa noocyo kala duwan oo miro dhaliya inta badan xilliga xagaaga, miraha waa in si joogto ah loo ururiyaa.
Goynta si fiican loo dhigo dambiilaha ama weelasha caag ah (alwaax), ku daboolan maro suuf ah ama waraaqo jilicsan. Si strawberries ma u ogolaan casiir ah, waa in lagu dhejiyaa lakabka keliya. Ku kaydi qaboojiyaha. Ka hor inta aanad dhicin, maydhin oo kala sooc nooca berry laguma talinayo. Si aad ugu raaxeyso dhadhanka delicious ee berry ee xilliga qaboobaha, waxaad isticmaali kartaa khalkhalka shoog. Si tan loo sameeyo, miraha nadiifka ah ee la dhigo lakabka keliya ee saxan iyo ku rid barafeeyaha. Ka dib markii lagu keydiyo, strawberries waxaa la geliyaa weel ama bac oo ku rid barafeeyaha.
Ma taqaanaa? Strawberries waa bakhaarka dhabta ah ee nafaqeeyayaalka yar yar iyo fiitamiinada. Waa hodan ku jirta fitamiin C (lix lixaadood - sida mid hal liimi ah) iyo folic acid (in ka badan raspberries iyo canab). Intaa waxaa dheer, isticmaalka strawberries waxay ka caawineysaa in ay caadi u yeelato shaqada xiidmaha, xoojinta derbiyada xididdada dhiigga, dejinta nidaamka difaaca.
Qof kastaa wuu ogyahay runta sahlan: goosashada wanaagsan waxay ku xiran tahay sida raaxo leh uu dhirta u dareemayo. Daryeel caafimaad oo hufan oo loogu talagalay strawberries "Lord" wuxuu u oggolaan doonaa in ka badan hal sano inuu ku raaxaysto this berry delicious.